Kunamata Points Kupesana Nemubhedha Wetting | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Kunamata Kunongedzera Pamubhedha Wetting
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo pakurwisa weti. Zvinoseka sezvo musoro uyu ungaratidzika, saka vanhu vazhinji vari kurwa pachivande nedhimoni iri. Muhupenyu hwedu, mukati memamwe mazera, isu tinotarisirwa kurara takanyorova, asi kana isu tikatanga kusvika kune imwe zera, uye isu tichiri takarara takatota, zvino inova chinhu chinonyadzisa nekuzvidzwa. Dhimoni rinokonzeresa kurara kwemvura muchinangwa chekunyadzisa munhu. Kuti munhu akura zvakakwana acharamba achinyudza mubhedha zvechokwadi chiratidzo chekunyara. Munhu akadaro haazorara kunze nekuda kwekutya kuradzika pamubhedha semunhu mukuru akura.
Mwari ave kuda kusunungura vanhu vake kubva kune inonyadzisa dhimoni remubhedha Wetting iro rave kuvarwadzisa. Zvichiri nani kana uchigara mumba memubereki wako asi kana nguva yekuenda kuchikoro yasvika, uye usiri kuzodzoka kumba mazuva ese, kana yasvika nguva yekuti iwe uende kuNational Youth Service Corp, ndiyo nguva iwe uchaziva kuti ihondo chaiyo. Bhuku raPisarema 25:20 Chengetai mweya wangu mundirwire; Ngandirege kunyadziswa; nekuti ndinovimba nemi. Mwari ave kuda kununura vanhu kubva mukunyara kwemubhedha Kunyorovesa sezvo dhimoni irikutambudza iwe uchabata moto wemweya mutsvene nekuda kwemunamato wako nhasi.
Mwari akaraira uyu mutungamiriri wekunamatira, uye kana Mwari achiraira chimwe chinhu chakadai, zvinoreva kuti Mwari akagadzirirwa kuita zvishamiso. Handina basa kuti makore mangani iwe uchirwa hondo iyi wega; chandinoziva isu tine Warlord mukuru anogara muZion; iye achatora kurwa panzvimbo yako uye akunde kurwira kwako. Kune murapi anova ndiye mambo mukuru weZion. Iye achaporesa urwere hwako nhasi nesimba reruoko rwake rwerudyi. Ruzvidzo rwako ruchabviswa, uye uchave wakasununguka muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinouya pamberi penyu nhasi kuzotaura dhimoni rakaipa iri ranga richindishungurudza dzimwe nguva ikozvino, ndaedza nzira dzese kuti ndikunde, asi zvaratidza kuti ndezve kubvisa. Ndinonamatira rubatsiro rwako pamusoro pe dhimoni rekuwacha pamubhedha, ndinonamata kuti iwe uchandibatsira kuti ndikunde naro nesimba rako muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzopesana nemweya wese uye dhimoni remubhedha Wetting iyo yakapihwa hupenyu hwangu kubva kuHumambo hwerima kundinyadzisa. Ndinonamata kuti muchaparadza madhimoni akadaro muzita raJesu.
Simba rese mumba mababa vangu rakaramba kundiregedza, dhimoni rese mudzinza rangu iro rakapika nguva dzose kundinyadzisa, ndinotema nemasimba edenga kuti vaparadzwe. Wese mweya usingaonekwe, kungave mumweya wepasi kana mweya wegungwa wakapihwa kundinyadzisa, ndinonamata kuti vabate moto muzita raJesu.
Ishe Jesu, kutambudzika kwese kwemuvengi kuri kushanda muhupenyu hwangu, ndinoraira kuti vabate moto muzita raJesu. Simba rega rega remadzitateguru rakapihwa kundinyadzisa, murume wese nemukadzi akasimba mumhuri yangu anga achishungurudza hupenyu hwangu, ndinonamata kuti sekuparadzwa kwakaitwa shato pamberi peareka yesungano, vaparadzwe muzita raJesu.
Dhimoni rega rega rakaipa nezvirwere zvandakakonzerwa nemuvengi zvinoita kuti ndirare ndakanyorova pese pandinovhara maziso kuti ndirare, ndinonamata kuti ropa regwayana riparadze nhamo dzakadai. Rugwaro runoti matambudziko haazomukizve rwechipiri, kushungurudzwa kwese kwedhimoni kwenyadzi, ndinoraira kuti vatange kubata moto muzita raJesu.
Ndinodaidzira kuparadzwa kwega rurimi rwakaipa rwunotaura zvakaipa muhupenyu hwangu, mukanwa mese wakaipa unosvipa zvakaipa kuhupenyu hwangu, ndinotema kuti vaparadzwe muzita raJesu Ishe simukai vavengi venyu vapararire, murume nemukadzi wese vakaungana kuzondibata ngavanyadziswe muzita raJesu.
Yese nyoka yekuzvidzwa yakambaira muhupenyu hwangu, ndinonamata kuti vabate moto weMweya Mutsvene muzita raJesu. Baba Tenzi, ndinonamata kuti mushandure nyadzi dzangu dzive mbiri muzita raJesu.
Rugwaro runoti, nekuti ndinoziva mifungo yandinayo kwauri, ipfungwa dzakanaka uye kwete dzezvakaipa kukupa iwe unotarisirwa kupera. Ndinonamata kuti zvese muhupenyu hwangu izvo hazvimbove zvako chirongwa kwandiri Ndinonamata kuti vatorerwe muzita raJesu.
Ndinodaidza kutsiva kwaMwari pane dhiragoni yenyadzi uye kushora uko kwakapihwa hupenyu hwangu kubva kuumambo hwerima. Ndinonamata kuti shato yakadai ibate moto muzita raJesu. Izwi renyu rakandivimbisa kuti handinyadziswe, ndinoraira kuti masimba ese anoda kundinyadzisa, moto waMwari Wemasimbaose utange kuvapisa kuita madota nezita raJesu.
Oo, iwe dhimoni rinondikonzeresa kuti ndirare kunyorova inzwa shoko raMwari, zvakanyorwa kuti ndiri wezviratidzo nezvishamiso zvaIshe, saka ndinouya kuzokurwisa iwe dhimoni rekurira pamubhedha muzita raJesu. Chinyorwa chinoti muti wese usina kudyarwa nababa vangu uchadzurwa. Ndinoraira kuti moto waMwari unoenda kumudzi wedambudziko iri woriparadza zvachose muzita raJesu.
Rugwaro runoti zivisa chinhu, chobva chasimbiswa; Ini ndinotaura kuti ndakasununguka kubva kudhimoni rinondikonzera kuti ndirare ndakanyorova muzita raJesu. Rugwaro runoti iye uyo mwanakomana akasunungura akasununguka. Chokwadi, ndakasununguka kubva kwauri dhimoni rekuwachisa pamubhedha muzita raJesu.
munamato pakurwisa weti
Munamato pamusoro penyadzi
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kudzorera kumashure
inoteveraKunamata Kunongedzera Kupokana
Havilah Mosheri June 29, 2021 Pa 6: 36 am
Nzvimbo yekunamatira iyi chikomborero chikuru kwandiri… zvese nezvazvo zvakangondinakira ini .. ..ndinongoda kungoti maita basa …… Mwari wedu haamborara ndosaka akaita kuti zviwanikwe kwandiri …… .. handigoni kukutendai zvakwana… .. ndinonamatira kuzodzwa kutsva pauri nehushumiri hwako mazuva ese muzita raJesu Anesimba !!!!!!! pls usandikanganwe muminamato yako yemazuva ese ndiri kupfuura nezvakawanda… .uye ndine chokwadi chekuti Mwari wedu anopfuura kugona kundiona 2ru munaJesu Zita risingaenzanisike rine simba !!!!! AMEN !!
50 Nyeredzi Yangu Inofanira Kupenyera Pfungwa dzeMunamato
Minamato Yezve Kuita Zvepabonde